ओली भारतवि,रोधी होइन, भारतीय हस्तक्षेप र हेपाहा प्रवृत्तिवि,रुद्ध लड्ने नेता हो सम्मान छ  !
कोरोनाको जो,खिम पहिलाभन्दा बढ्दै छ । बाढीपहिरोको मौसम थपियो । लिम्पियाधुरासम्मको भूगोल फिर्ता ल्याउनु छ । सबै रा,जनीतिक दल र तीन करोड नेपालीको एकता रा,ष्ट्रले खोजेको छ नक्सा अद्यावधिक गर्दाजस्तो । तर दु,र्भाग्य, यहीबेला सत्तारूढ नेकपा लाजमर्दो आन्तरिक द्व,न्द्वमा छ । र, केन्द्रमा छ– सत्ता । अझ भनौँ, नेकपाभित्रको मात्र होइन, मुलुककै तुलनात्मक योग्य र सक्षम व्यक्तिको ज,बर्जस्ती विकल्पको खो,जी । जनमतले भन्छ केपी शर्मा ओलीसहितको सहमतिमा कुनै नि,र्णय हुन सक्छ । तर, ओलीलाई पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, माधव नेपाल वा पहिला नै सरकार र पार्टीको नेतृत्व गरेका व्यक्तिले प्रतिस्थापन गर्नु देश र पार्टीको हितमा छैन ।
कोरोनावि,रुद्ध अझ प्रभावकारी यु,द्ध लड्नुपर्नेछ । सम्भावित बाढीपहिरो नि,यन्त्रणका उ,पायमा र,णनीति बनाउन सरकार र रा,जनीतिक दल केन्द्रित हुनुपर्नेछ । यस्तो बेला सरकार र सिङ्गो पार्टी नागरिकका लागि महŒवहीन ए,जेन्डामा त,नावपूर्ण समय खर्चंदै छ । वैधानिक संरचनाभन्दा भूमिगत संरचना सक्रिय भएका छन् । समानान्तर पार्टी सत्ता सञ्चालनको प्रयास गर्न खोजिँदै छ । योजनाबद्ध वा संयोग, स,त्तारोहणका लागि बाह्य पक्षलाई ह,स्तक्षेप गर्न आमन्त्रण गरिँदै छ । ओलीको पहिलो नौमहिने र वर्तमान सत्तामा बाह्य पक्ष प,राजित भएको हो । घरेलु नेतृत्वमा आत्मविश्वास र क्षमता हुँदा अस्थिरतामा नि,र्णायक हुने बाह्यशक्ति असफल हुन्छन् । त्यसैले तत्काल पार्टी झगडा ब,न्द गर्नुपर्छ । र, नेकपा राष्ट्रिय स,मस्या समाधानमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।
च,रित्रका दृष्टिकोणले पनि सत्तावि,रुद्धको जनमत बढी हुन्छ । आ,लोचना सत्ताकै हुन्छ र समाधानको आ,ग्रह पनि सत्तालाई नै गरिन्छ । तर, सत्ताको ने,तृत्व गरिरहँदा ओलीको लोकप्रियता घटेको देखिँदैन । अतिरिक्त आकाङ्क्षा सम्बोधन नहुँदा गुनासा सार्वजनिक भएका छन् । तर, ओलीको विकल्प खोज्ने नागरिक ‘मुड’ देखिँदैन । अन्तरद्वन्द्व चर्किरहँदा ओलीको पक्षमा देखिएको सडक र सामाजिक सञ्जाल समर्थनले त्यता सङ्केत गर्छ । सत्ता प्रधानमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्मात्र होइन भन्ने मान्दा सत्तारूढ पार्टीका सबै नेता सत्ताका अङ्ग हुन् । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय नेपाल र खनाल सबै सत्ता हुन् । फेरि वि,वादको ‘इपिसेन्टर’ पनि सत्ता हो । पार्टीको शक्तिशाली सरकार छ । संसद्का तुलनात्मक योग्य सदस्य मन्त्री छन् ।नातागोता र गुटको रसायन मिलाउँदा कोही अनपेक्षित लाभको ने,तृत्वमा पुगेका हुन सक्छन् । यसलाई नेताहरूले सच्याउनुपर्छ । फेरि २०७६ मङ्सिर ४ को ओली र प्रचण्डबीचको सहमति छ । ओलीले पाँच वर्ष सरकार चलाउने र प्रचण्डले कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतमा पार्टी चलाउने नवीकृत सहमति कार्यान्वयनमा छ । तर, यी यथार्थ बिर्सेर ओलीको एकसूत्रीय रा,जीनामातर्फ किन आन्तरिक रा,जनीति मोडियो ? आश्चर्य छ । सिद्धान्त, विचारको वि,वाद भएको भए ठिकै मान्न सकिन्थ्यो ।
यसबीचमा मदन भण्डारी, मनमोहन अधिकारी र पुष्पलाललाई सम्झने संस्थागत प्रयाससमेत पार्टीले गरेको देखिएन । जब कि मदनको जबजका कारण युरोपमा कम्युनिस्ट सत्ता ढ,ल्दा नेपालमा आरम्भ भएको यथार्थ हो । तर, वि,वादको जरो को प्रधानमन्त्री, को राष्ट्रपति भन्ने भयो, जुन दुर्भाग्य हो । विभाजित कार्यकर्ता केही समयका लागि संयमित हुन सक्छन् तर नागरिकको विश्वास गुमाउने अवस्था आउन सक्छ पश्चिम बङ्गालमा जस्तो ।एउटा सकारात्मक पाटो देखियो । नेकपामा दोस्रो पुस्ताका नेता वा त्यसपछिका युवा नेताको स्वतन्त्र हैसियत देख्न सकिएको थिएन । उनीहरूमा जीवन देखिएको थिएन, अहिले देखिँदै छ । कृषिमन्त्री घनश्याम भुसालको निवासमा असार १९ मा भएको बैठक र त्यसै दिन पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा भएको सत्याग्रह त्यसका उदाहरण हुन् । सत्याग्रहको रसायन भने साँघुरो देखियो । यो पुस्ताले अझै ह,स्तक्षेप गर्न नसकेको पक्ष छ– ७० वर्ष पुगेका, पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरेका सबैलाई विश्रामका लागि सामूहिक द,बाब दिने ।
शङ्कर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, वर्षमान पुन, टोपबहादुर रायमाझीहरूले गलबन्दीचाहिँ पुरानै लगाउने मोहबाट मुक्त हुने हि,म्मत गर्नुपर्छ । यो गरेको देखिँदैन । यो समस्या नेपाली काँग्रेसमा झन् बढी छ । त्यहाँ युवाले क्षमताअनुसार नेतृत्व पाएका छैनन् । विश्वास राखौँ सत्ता र विपक्षका देशप्रति चिन्तित युवाको चिन्तन यसतर्फ हुनेछ । तर, अहिलेको मूल बहस घरेलु रा,जनीतिमा बाह्य चासो र ह,स्तक्षेपको हो । पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्कंदा र आन्तरिक एकता खण्डित हुँदा घरेलु मामिलामा बाह्य समुदाय कसरी प्रवेश गर्न खोज्छ भन्ने हो । विदेशी संस्थापन, एजेन्सी र तिनका घरेलु प्रतिनिधि कसरी अप्ठ्यारोमा खेल्न खोज्छन् भन्ने हो । केही उदाहरण हेरौँ ।
यो प्रचारमा दक्षिणका मिडिया एक छन् । उताका विदेश र रक्षा विश्लेषकले यो प्रमाणित भएको भन्दै ओलीलाई अब नयाँदिल्लीले विस्थापित गर्नुपर्ने मु,द्दा उठाएका छन् । नेपालका केही नेता र विश्लेषकले घुमाउरोपारामा चीनले आन्तरिक मामिलामा ह,स्तक्षेप गर्दा कतैबाट पनि वि,रोध नहुने र भारतले नगर्दा पनि शङ्का गरिने अवस्था रहेको बताउने गरेका छन् । तर, यो सही होइन । ओली चिनियाँ वा भारतीय शिविर प्रवेश गर्ने नेता होइन । सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय स्वार्थको नेतृत्व गर्दा कसैका दोषी चश्माले कुनै शक्तिकेन्द्र नजिक देख्दो हो । त्यो देख्नेको दोष हो, ओलीको होइन । ओलीले भारतीय नाकाब,न्दी वि,रुद्ध लड्नुभयो, त्यो चीनको पक्षमा थिएन वा चीनका तर्फबाट थिएन । नेपाली जनताको पक्षमा थियो । नेपालको आत्मसम्मानका पक्षमा थियो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले चीनसँग यातायात तथा पारवहन सम्झौता गर्नुभयो, त्यो भारतविरुद्ध थिएन । नेपाल र नेपाली जनताको पक्षमा थियो । लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहितको नक्सा उहाँको ने,तृत्वमा अद्यावधिक भयो, यसमा सबै पार्टीको योगदान रह्यो । नयाँदिल्लीविरोधी र बेइजिङ पक्षधर हुन यस्तो साहसिक र ऐतिहिासिक कदम चालिएको होइन । कम्युनिस्ट भएका कारणले ओली चीनसँग नजिकिएको भन्ने दक्षिणको अर्को बुझाइ पनि गलत छ ।
चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी ‘नियन्त्रित’ प्रजातन्त्रवाला पार्टी हो, नेकपा प्रजातान्त्रिक कम्युनिस्ट पार्टी हो । नेकपा अर्गानिक पार्टी हो, त्यसको आधार जबज हो । ओलीले ल्याएको हो नेपालमा छिमेक नीति । मोदीले ‘छिमेकी पहिला’ भन्नुभयो, सी चिनफिङले ‘वरपर कूटनीति’ ल्याउनुभयो । मोदीले ‘एक्ट इस्ट’ नीति ल्याउनुभयो, सीले ‘बीआरआई’ ल्याउनुभयो । नेपालले भारत र चीनबाट हुने रा,जनीतिक ह,स्तक्षेप नमान्ने तर विकासमा साझेदारी मान्ने नि,र्णय ग¥यो । बीआरआईमा सहभागिता विकासका लागि हो, बेइजिङतिर लहसिन होइन ।चीन र पाकिस्तान सबै मौसमका साथी हुन् भन्दैमा नेपालले पाकिस्तानलाई मित्र ठान्नुपर्ने हुँदैन । र, त्यसका कारण भारतले नेपालप्रतिको दृष्टिकोण बदल्नुपर्दैन । अहिले रा,णातन्त्र होइन, राजतन्त्र होइन, अहिले गणतन्त्र हो । र, प्रधानमन्त्री ओली हुनुहुन्छ, जो नेपाली स्वार्थका ने,तृत्वकर्ता हुनुहुन्छ ।
भ्रम २ : अमेरिकी स्वार्थको परोक्ष ने,तृत्व आफूलाई उत्तर नजिक रहेको ठान्ने नेता र विश्लेषक ज,बर्जस्ती विकासक्रम जोड्ने प्रयास गर्छन्, जुन गलत हो । ओलीलाई वि,वादमा तान्न कुनै आधार नभएपछि एमसीसीसँग जोडिएको छ । एमसीसी ओलीको निजी परियोजना होइन, उहाँको पालामा ह,स्ताक्षर भएको पनि होइन । ओलीले कुन देशले अनुदान दियो भनेर हेर्नुभएको छैन । त्यो देशको च,रित्र पुँजीवा,दी, साम्यवा,दी वा समाजवा,दी के हो, त्यसलाई आधार बनाउनुभएको छैन ।अनुदान कस्तो हो, के बनाउने र कसको हितमा भन्नेलाई हेर्नुभयो । अर्थात् बिरालोको रङ्ग हेनर््ुभएन, मुसा मार्छ कि मार्दैन भन्ने हेर्नुभयो । त्यसरी हेर्दा यो परियोजना नेपालको विकासमा सहयोगी हुन सक्ने ठान्नुभयो । संसद्बाट पारित होस् भन्ने चाहना राख्नुभयो ।
यसो भन्नु अमेरिकी पक्षधरता होइन वा चीनको वि,रोध पनि होइन । नेपालमा प्र,सारण लाइन निर्मा,ण र नेपालका सडक स्तरोन्नतिमा अमेरिकी स्वा,र्थ छैन, नेपाली स्वा,र्थ छ । शक्तिराष्ट्र भएको देखाउने अमेरिकी स्वा,र्थ हुन सक्छ, त्यसो गर्दा नेपाललाई ख,तरा छैन । अमेरिकी सेना आउनु वा नेपाललाई सैन्य बेस क्याम्प बनाउनुजस्ता भ्र,मलाई पत्याउन थाल्ने हो भने दूतावास कूटनीतिकै वि,रोधमा उत्रनुपर्ने हुन्छ ।
भ्रम ३ : भारतवि,रोधी नेता ओली भारतवि,रोधी नेता होइन, भारतीय ह,स्तक्षेप र हे,पाहा प्रवृत्तिवि,रुद्ध लड्ने नेता हो । नक्सा अद्यावधिक गर्ने नि,र्णय नेकपाको हो, पछि सबैको समर्थन भएको हो । अध्यक्षको है,सियतमा नि,र्णयको नीतिगत ने,तृत्व र प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्यान्वयनको ने,तृत्व ओलीले लिनुभएको हो । यो भारतवि,रोधी कदम होइन, नेपालपक्षीय हो । नेपालको पक्षमा भएको नि,र्णयलाई भारतको वि,रोध ठान्नुहुँदैन । विभिन्न नेताहरूका सायद बाध्यता थिए, उहाँहरूले जायज मु,द्दा उठाउन सक्नुभएन ।
ओलीले उठाउनुभयो, फरक यही हो । भारतीय सञ्चारमाध्यमका रिपोर्ट हेर्दा नेपालमा अहिले भारतवि,रोधी सरकार छ भन्ने प्र,माणित गर्न खोजिएको छ, जुन प्रमाणित हुँदैन । ओलीले पारस्परिक स,हयोग, सम्मान र लाभका मु,द्दामा कहिले पनि भारतको वि,रोध गर्नुभएको छैन । सार्वभौमिक समानताका आधारमा द्विपक्षीय सम्बन्धको विकास गर्ने सोच ओलीको हो । तर, जब भारतका तर्फबाट आन्तरिक मामिलामा पुरातन हस्तक्षेप हुन्छ, उहाँ वि,रोधमा उत्रनुहुन्छ । भएको यही हो । संविधान, नाकाब,न्दी सबैमा भएको यही हो ।राष्ट्रिय एकतामा यस्ता भ्रम त्यसैमा सीमित हुन्छन् । विभाजनमा बाह्य पक्षले खेल्ने हो । नेकपा परिवर्तनको ने,तृत्वकर्ता हो भन्ने प्रमाणित गर्ने हो भने निहित व्यक्तिगत सत्तास्वा,र्थ त्यागेर तुरुन्तै सहमतिमा पुग्नुपर्छ । आफ्नै नेतावि,रुद्ध बाहिरियाको आड र भरोसाले दु,र्घटनाउन्मुख गराउँछ ।(लेखक गोरखापत्रका सम्पादक सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।)